Ghostwriter Sayniska Waxbarashada Waxaan Qoraynaa shaqadaada Warqadaha
Qorayaashayagu waxay leeyihiin khibrada lagama maarmaanka u ah dhanka waxbarashada
Barashada cilmiga waxbarashadu waa koorso madaxbanaan. Sababtoo ah qodobbada udub-dhexaadka badan, koorsadu waa mid isku-dhafan, maxaa yeelay waxyaabo badan oo ka kooban maadooyinka waxbarashada, cilmiga bulshada iyo cilmu-nafsiga ayaa la baraa. Sidaa darteed layaab ma leh in muuqaalka maadooyinka uu ka bilowdo waxqabadka guud ilaa waxbarashada dugsiga xannaanada, aragtiyaha waxbarashada, waxbarashada bulshada, waxbarashada dadka waaweyn iyo waxbarashada siyaasadeed.
Mawduuca dhamaystiran ee sayniska waxbarashada, seddex waji oo muhiim ah ayaa lagu nuuxnuuxsan karaa oo tilmaamaya habka shaqada iyo tilmaamaha cilmi baarista shaqsiga:
waxbarashada muhiimka ah iyo
Danaha ugu weyn ee sayniska waxbarashadeed ee xasaasiga ah waa habab waxbarasho oo la doonayo in lagu qiimeeyo si ku-meel-gaar ah. Cilmiga sayniska ee halista ah wuxuu ku saleysan yahay shakhsiyaadka ay tahay in loo dallaco qaab bartilmaameed ah. Waxbarashada bini-aadamnimada waxay isku dayeysaa inay sharraxdo dhinacyada waxbarashada iyo barbaarinta qaab taariikheed iyo bulsho.
Iyadoo aan loo eegin astaamaha ugu muhiimsan ee lagu garto waaxda cilmiga sayniska, maaddooyinka waxbaridda waxaa loo soo dhoweynayaa ardayda maadooyinka waxbarashada, aqoonta iyo macluumaadka, waxqabadka, barbaarinta, dugsiga, barashada, is dhexgalka bulshada, barashada iyo barista.
Koorsadu waxay u qaybsan tahay shahaadada koowaad iyo tan labaad.
Shahaadadaada koowaad ee bachelor-ka waxaa lagu gartaa barashada cilmi-baarista aasaasiga ah ee sayniska waxbarashada waxayna baraysaa, tusaale ahaan, aragtiyaha guud ee fikirka waxbarashada iyo ku-simaha ama habraacyada kale ee waxbarasho iyo waxbarasho. Barnaamijka sayidku si tartiib tartiib ah ayuu ugu wajahan yahay qaybaha la xiriira arjiga. Kuwaas waxaa ka mid ah, tusaale ahaan, talobixin waxbarasho iyo barid ama cilmiga waxbarashada oo ah caqabad bulsheed caalami ah. Inta lagu guda jiro waxbarashadaada waxaa lagaa hor imaan doonaa tiro badan oo ah waraaqo cilmiyaysan oo ay tahay inaad qorto. Ha ahaato warqad erey bixin ah, warqad aqoon-isweydaarsi ama shaqo mashruuc ama caqabadaha ugu waaweyn ee barashadaada oo ah qaabka shahaadada koowaad ee bachelor iyo / ama. Macna ma laha nooca shaqada ee la sugayo, shaqada caynkaas ahi waxay ka dhigan tahay hal shay oo dhan - shaqo aad u tiro badan oo leh cadaadis waqti badan leh, maxaa yeelay waqtiga kama dambaysta ah ee soo gudbinta badanaa waa mid aad u adag.
Waxaan ka jawaabeynaa dhammaan weydiimaha gaarka ah ee macaamiisha iyadoo loo marayo taageerada shaqsiyadeed ee dhow - dhammaan waaxyaha iyo, dabcan, sidoo kale sayniska waxbarashada. Abuur codsi macaamil oo waxaan kuu sameyn doonnaa dalab si gaar ah ugu habboon baahiyahaaga!
Rajada xirfadeed ee sayniska waxbarashada
Qaybta dambe ee mas'uuliyadda aqoonyahannada ayaa aad u kala duwan. Meelaha suurtogalka ah ee dalabku wuxuu noqon karaa:
Goobaha waxbarashada dadka waaweyn iyo naafada
Xanaanooyinka ama goobaha kale ee waxbarashada
Guryaha howl gabka ah ama goobaha waxbarashada ee gabowga
Shirkadaha leh nidaam tababar oo adag.
Iyada oo kuxiran diiradda xirfadeed ee aad dooratay, hal shay oo ka sarreeya dhammaan ayaa go'aan ka gaari doona codsadayaasha kale markay bilaabayaan shaqadaada - natiijadaada guud ee imtixaanka iyo gaar ahaan waxqabadka shahaadada bachelorka iyo mastarka. Xilalka maamulka, shahaadada mastarka sidoo kale waa shuruud lama huraan u ah koorsooyinka tababarka gobolka ee dheeraadka ah.
Hubinta tayada ee duurka sayniska waxbarashada